Karman Inobatsira Rail ine Padded Grip ASSRL-100
musha / chitoro / Njanji dzeMubhedha
Yedu Inobatsira Njanji inoitirwa kubatsira vashandisi mukumira kana kugara kubva pasofa, recliner, kana chigaro. Iyo dhizaini yepasirese inobvumira nyore 3 yechipiri kuisirwa, pamwe nerunyararo rwepfungwa neyakajairika yakakwira density density furu inobata uye yakashata dhizaini.
Batsira Rail - ASSRL-100 huwandu
Categories: Njanji dzeMubhedha, Mazuva ese Aids
Iyo Inobatsira Rail yakagadzirirwa vashandisi kana vadiwa avo vanotambura mukuomerwa nekumira kana kugara kubva pasi pakagara. Nekutsvedza zviri nyore muTraffic Yekubatsira pasofa, chigaro, kana recliner, mushandisi anopihwa kugadzikana, kuchengetedzeka, kutsigirwa, uye kunyaradzwa panguva yekuchinjisa. Inoumbwa nepamusoro unhu, isina huremu simbi, iyo Inobatsira Rail inoratidzira 1-tubing uye gobvu rakaputirwa furo rinobata kune yakanakisa bang yemari yako pamusika.
Yese Dhizaini - Inoisa paCouch kana recliner
Furo Rinobata Ipa Kubata uye Kuchengetedza
Dual Tsigiro Inobata yeKachengeteka Kwakamira
1, Simbi Tubular Dhizaini Inovimbisa Kugadzikana
Kurema Unyanzvi: 300 lbs
Akazara murefu 15 inches
Kunopindirana Kureba 9 inches
Yakapetwa Kwose Upamhi N / A
Upamhi Pakati Pazvibato 20 inches
Chiremera Chechigadzirwa 6 LBS
Kutumira Kukura 24, L x 10, W x, 3 ″ H
BATSIRA RAYIRA UPC #
23 × 15 × 9 mukati